Nosamborina noho ny ‘faniratsirana’ ny finoana Islamo tany Bangladesh ilay mpihira bãul Shariat Sarkar · Global Voices teny Malagasy
Mihaika ny filazana fa voarara amin'ny finoana Islamo ny mozika izy
Voadika ny 04 Febroary 2020 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Français, Ελληνικά, Italiano, Español, বাংলা
Mpanakanto avy amin'ny fikambanana ara-kolontsaina Udichi nanao fihetsiketsehana manohitra ny fisamborana ilay mpanakanto bãul Shariat Sarkar ary nitaky ny famotsorana azy. Sary avy amin'ny pejin'i Udichi Facebook. Nahazoana alàlana.
Nosamborin'ny polisy Bangladeshita i Shariat Sarkar (40 taona), mpanakanto Baul (Sufi) malaza, noho ny filazana fa naneho hevitra nanaratsy ny “fihetseham-po ara-pinoana” Miozolomana. Voampanga ho nanitsakitsaka ny Andalana faha-28 amin'ny lalàna henjana momba ny Fiarovana Nomerika izy.
Nandritra ny fampisehoana iray tamin'ny faran'ny volana Desambra 2019, voalaza fa nanakiana ny mpitondra fivavahana Miozolomana izay tsy mankatoa ny fihirana izy ary nifanamby 5 tapitrisa taka (58.800 USD) ho an'ny olona rehetra izay afaka manaporofo fa voarara ny mozika eo ambanin'ny soratra Islamika.
Nosamborina teo ambany lalànan'ny fiarovana nomerika 454009 i Baul Shariat Sarkar.
Nalefa tao amin'ny YouTube (nesorina taty aoriana) ny horonantsary iray nampiseho ny fampisehoany ary niparitaka be tao amin'ny tambajotra sosialy. Ny hafa kosa nanohy nandefa ilay lahatsary.
Nidina an-dalambe tany amin'ny toerana samihafa ireo mpandala ny mahazatra sasany notarihin'ny mpitondra fivavahana Miozolomana, nanao hetsi-panoherana tamin'ilay lazaina fa fanehoa-keviny maniratsira ny finoana Islamo, ny Quran ary ny mpitondra fivavahana Miozolomana. Nisy olona iray avy ao amin'ny toerana nisy azy tany amin'ny distrikan'i Tangail (100km miala ny renivohitra Dhaka) nitory azy tamin'ny 9 Janoary noho ny filazana fa nandratra ny fihetseham-po ara-pinoana ka nahatonga ny fisamborana azy .
Nandefa azy tany am-ponja ny fitsarana rehefa vita ny famotorana azy nandritra ny telo andro tany amin'ny paositry ny polisy. Mbola tsy voafaritra ny saziny tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity.
Voarara ve ny mozika amin'ny finoana Islamo ?
Niadian-kevitra ara-tantara ny fanontaniana momba ny hoe moa ve azo atao ny mozika amin'ny finoana Islamo ary miovaova araka ny faritra sy fomba fanao izany. Naneho ny heviny tany amin'ny taonjato maro lasa izay ilay manam-pahaizana Miozolomana malaza Imam al-Ghazzali ary nanonona ny andinin-tsoratra fa azo atao ny mozika . Ny vondrona Mizolomana Salafista sy Wahhabita sasany anefa dia nilaza ny andininy sasany ao amin'ny Quran ho porofo fa haram (voarara) ny mozika.
Iza ny avy ireo Bauls?
Andiana mpihira mistika mpitety faritra avy any Bangladesh ny Bauls ary manana ny tarazo ara-mozika matanjaka. Vondrona tsy mitovy loko mihitsy izy ireo, ahitana sekta maro. Na izany aza, maro amin'izy ireo no ao amin'ny antokom-pivavahana Haindò Vaishnava sy Miozolomana Sufi. Karazana hira nentim-paharazana miavaka ny mozika baul izay mety ho miresaka filozofia sy ara-panahy ary matetika mankalaza ny fitiavan'Andriamanitra.
Ao anatin'ny karazana Sufi ireo hira hirain'i Baul Shariat Sarker. Tantara tranainy ny Sufisme any Bangladesh. Niely tany Bangladesh tamin'ny alàlan'ny asan'ny Sufis ny Islamo.
Fihetsiketsehana marobe manohitra ny fitazonana azy
Naneho hatezerana tamin'ny fisamborana ilay mpanakanto Baul noho ny Lalànan'ny Fiarovana Nomerika ireo liam-pivoarana sy ireo mpikatroka ara-kolontsaina ao amin'ny firenena. Nokarakarain'ny fikambanana mpanakanto isankarazany nitaky ny famotsorana azy ny rojo olombelona sy fivoriam-panoherana.
Nanasongadina ny maha-ara-panahy ny finoana Islamo ilay mpanoratra Swakrito Noman ary nilaza fa hadisoana ny nisamborana an'i Shariat Sarkar:
Nihaino ilay rindran-kira iray manontolo nataon'i Shariat Bayati (mpihira) aho. Tsy nilaza zavatra naniratsira izy na nanafintohina ny fivavahana . Niresaka momba ny fihatsarambelatsihy amin'ny anaran'ny fivavahana izy, tamin'ny fombafomba ara-pivavahana mamitaka. Mba hahatakarana ny teniny dia tsy maintsy mahatakatra ny lafiny ara-panahy amin'ny finoana Islamo sy ny antokom-pivavahana maro izay nizarazara aloha ianao. Manaraka ny fandikana ara-panahy ny finoana Islamo (Sufisme) ny baul tahaka an'i Shariat. Hadalana ny mitsara azy amin'ny tenin'ny Soratra Masina. Tsy rariny ny fisamborana azy araka ny fihainoana ny fiampangana nataon'ireo mpitondra fivavahana Miozolomana mpandala ny nentin-drazana.
Mihevitra ilay mpanao gazety Kabir Ahmed fa tsy mety ny fisamborana azy na dia voarara aza ny mozika amin'ny finoana Islamo satria heverina ho demaokrasia i Bangladesh:
Azo hamarinina ve ny fisamborana an'i Baul Shariat Sarker raha toa ka voamarina ao amin'ny Quran fa ‘haram’ (voarara) izany ? Ny valin-teniko dia hoe tsia ! Finoanao manokana, fandresen-dahatrao manokana ny fomba fahitanao ny boky masina fa tsy olana manerana ny firenena.
Te-hahafantatra ilay mpanao gazety sady mpanoratra Raju Alauddin hoe inona no fototra na ny fitsipika izay heverin'ny mpandala ny mahazatra fa mampanafintohina ny fanambarany:
Tsy hitako ny fanazavana mazava momba ny antony nahatonga ny tenin'i Shariat Bayati ho manafintohina; manaratsy, amin'ny fepetra inona ? Na izany aza dia voasambotra izy ary naiditra am-ponja. Indrisy, tafiditra anaty haizina ny taniko!
Nanentana ireo manam-pahaizana ao amin'ny firenena mba hiditra amin'ny fanambin'i Shariat Sarker fa tsy hanenjika na hanimba azy i Shariful Hassan, mpanao gazety sady mpikatroky ny fampandrosoana:
Nanao fanamby ampahibemaso i Shariat Sarker- raha misy olona afaka manome porofo ao amin'ny Coran fa voarara ny mozika; Omeny 5 tapitrisa BDT ( 58,800 USD) io olona io. Tsy mila mitory azy na mangataka ny fitazonana azy ny manam-pahaizana Islamika fa tokony hifanamby aminy ary mahazo an'io vola io (raha diso izy).
Nizarazara ny hevitra tao amin'ny tambajotra sosialy. Nanohy ny fanononana ireo andininy ao amin'ny Koràny sy ny hadiths ny mpisera sasany ho toy ny fanondroana fa voarara ny mozika amin'ny Islamo.
Fanamby ho an'ny tarazo Sufi any Bangladesh
Misy fiantraikany lehibe amin'ny vahoaka ao Bangladesh izay nianatra ny fampifangaroana ny kolontsaina amin'ny fivavahana ny politika liberaly Sufisme. Saingy, tato anatin'ny am-polo taonany maro izay dia nipoitra ny tontolo sarotra iainana manohitra ny Sufis noho ny fandrahonana avy amin'ireo mpandala ny nentin-drazana izay mihevitra fa “nivily làlana avy amin'ny finoana Islamo” ny Sufis. Hoy i Simon Zakaria, mpikaroka momba ny mozika folk ao amin'ny Akademia Bangla tamin'ny BBC Bangla:
Taorian'ny nanafahana an'i Bangladesh, nisy vondrona ara-pivavahana (mpandala ny nentin-drazana) manokana natosika fatratra ary niova tsikelikely ny fomba fisainana ara-kolontsaina. Nahazo vahana tamin'ny fampianarana sy ny fitantanana ireo fitaomana ireo.
Lalànan'ny fiarovana nomerika nampiady hevitra
Manameloka ny karazam-pitenenana anaty aterineto isankarazany ny Lalànan'ny Fiarovana Nomerika 2018, manomboka amin'ny hafatra manala baraka ka hatramin'ny fanambarana izay “manimba ny soatoavina ara-pivavahana na ny fihetseham-po.” Milaza ny andalana faha 28 amin'ny lalàna hoe:
“Raha misy olona na vondrona mikasa na minia hanimba ny fihetseham-po ara-pinoana na ny soatoavina na mikasa ny hamoaka na handefa zavatra amin'ny alàlan'ny tranonkala na amin'ny endrika elektronika hafa ka mandratra ny fihetseham-po ara-pinoana na ny soatoavina dia heverina ho fandikan-dalàna ny fihetsika ataon'izany olona izany. ”
Naneho ny ahiahiny momba ity lalàna ity hatrany am-boalohany ireo mpanao gazety sy ny mpikatroka ho an'ny zon'olombelona, ary maro ny fanenjehana natao tamin'ireo mpanoratra, poeta ary mpikatroka noho ny fampiasana io lalàna io. Ankoatra ny fanamelohana ny fitazonana an'i Shariat Sarker dia maro no nitaky ny fanafoanana ilay lalàna mampiady hevitra.
Vakio : Milaza ireo mpanandratra an-teny ny fahalalaham-pitenenana fa ‘masaka hanaovana fihoram-pahefana’ ny Lalàna vaovao amin'ny fiarovana nomerika ao Bangladesh
Vakio:Lahatsoratra Facebook miteraka fisamborana any Bangladesh, mampiahiahy ny mpiserasera [mg]
Naneho ny ahiahiny mafy tamin'ny fisamborana an'i Shariat Sarker ny Zaikabe momba ny Zon'Olombelona any Bangladesh, vondrona vao natsangana ho an'ny mpikatroka ary nitaky ny famotsorana azy avy hatrany.
Raha voaheloka, mety higadra 3 ka hatramin'ny 7 taona i Sarker araka ny lalànan'ny Fiarovana Nomerika.